Iimfazwe zeMfazwe zeMfazwe - IiFilimu zeMfazwe ezinkulu (Uluhlu
Enoba ukuhambisa izenzo zobukhosi zamajoni okanye ukubonakalisa ubunzima obubuhlungu bemfazwe, iifilimu zemfazwe zide ziba yi-Hollywood. Yonke into evela kwiMfazwe yombutho kunye neMfazwe Yehlabathi II ukuya eVietnam kunye neemfazwe zamaRoma zasendulo ziye zabonakaliswa ngendlela ebonakalayo kwifilimu. Nazi ezinye ezithoba ezona zi-movie ze-classic ze-war.
Ngokuqinisekileyo enye yeyona nto ibonisa ngayo iMfazwe Yehlabathi I, i-Lewis Milestone's All Quiet kwi-Western Front yayinamandla okulwa nemfazwe eyayixhalazela ukubonakalisa izinto ezinobungozi zokulwa kwaye zaphumelela kwi- Award ye-Academy Award ye - 1929/30 . Ifilimu ilandele iqela leentlanga zaseJamani ezizivolontiya ezenzweni kwi-Western Front ekuqaleni kwemfazwe, kuphela ukubona iinjongo zabo zichotshozwe yigosa elingapheliyo (uJohn Wray), kwaye ekugqibeleni igazi kunye nokufa kwabo kulindeleke ngaphambili imigca. Nangona edunyiswa eUnited States, le filimu yayivalwe ngenxa yeso sigxina sokulwa neJamani ngamaNazi nabanye ekukhokelela kwiMfazwe Yehlabathi II.
Eyona nto ibonisa ifilimu yemfazwe, uSergeant York wayephelelwe ixesha kunye nokukhutshwa kwayo ngexesha leentsuku zakuqala zeMfazwe Yehlabathi II. UGary Cooper wadlala ubomi be-heroin-war-war-war-hero e-Alvin York, umfama okhulisa isihogo ophendukela kuThixo emva kokubetha ngokukhanya kunye nezibhambathiso ukuba akaze aphinde athukuthele. Ewe, loo mvakalelo ayifanelekanga xa iMelika ingena kwiMfazwe Yehlabathi I ngo-1917, ekhokelela kwisibhengezo saseYork sokuba unyanzelekile ngenxa yesazela emva kokuqulunqwa. Ukuphoqelelwa ukulwa emacaleni angaphambili, iYork iba iqhawe lesizwe kunye neMedal of Honour winner for heroes in battlefield. Ebhalwa nguJohn Huston kwaye ekhokelwa nguWoward Hawks , uSergeant York ubonisa u-Cooper ekusebenzeni kwakhe okugqwesileyo kwaye yayiyintloko yebhokisi yeofisi.
Ekhokelwa yi-movie yama-epic amafilimu uDavid Lean , I-Bridge yaseMfuleni iKai ibanjwe enye yeemafilimu amakhulu kunazo zonke ezenziweyo kwaye iqulethe enye yeentsebenzo ezigqwesileyo zika-Alec Guinness. I-Guinness idlala igosa laseBrithani eligqityiweyo elivalelwe kwenkampu yaseJapan yasePOW eyenza imfazwe yentando kunye nomphathi wenkampu (uSessue Hayakawa) phezu kokwakha ibhuloho phezu kweKai. Okwangoku, ijoni laseMelika ( uWilliam Holden ) likhupha iphosa elikhuselekileyo, kuphela ukuba lijongane nenkundla yecala xa umkhosi ufumanisa ukuba uyindoda ebhalisiwe eyenza igosa. Oku kukhokelela ekusebenzeni-okanye-kufa ekubhubhiseni ibhuloho emva kokuba uGuinness atyunde uxinzelelo aze aqhube ukwakhiwa kwayo. Omkhulu kunakho konke, ifilimu yayiyidrama yemfazwe yamaqhawe kunye nesifundo somntu onamandla esinokubakho iofisi yebhokisi ekubanjeni ngoxa iphumelela i-Oscars ezisixhenxe, kuquka neNew Best Picture.
Izibhamu zaseNararone - 1961
Le nkqubela yeMfazwe yehlabathi yesiXhosa ibonisa inkqantosi yonke kaGregory Peck, uDavid Niven no-Anthony Quinn njengamalungu eqela lamaqela alliance asebenzele umsebenzi ongenakwenzeka wokutshabalalisa iinqanawa ezinkulu zamaNazi zimila umgca kwi-Aegean Sea. Izibhamu zaseNararone yi-movie yesenzo ephumelelayo kwimisebenzi eqinileyo evela kwiintathu zayo zikhokelela ngaphandle kokuqhutyelwa kokuqhuma okungenanto. Ewe, kukho ininzi inxaxheba kuyo yonke indawo, ukususela kwisigodlo se-patrol kwisiJamani ukuya kumzamo wokugqibela wokukhupha izibhamu ngaphambi kokuba iinqanawa ze-Allied zitshabalalise. Ukugqithiswa kwefilimu kwenzelwe i-sequel engaphantsi, i- Force Ten esuka eNararone (1977), kunye noRobert Shaw noHarrison Ford bathatha iPeck ne-Niven.
Le mpi enkulu yeMfazwe Yehlabathi II yaqhayisa abalawuli abathathu, i-star star enkulu kunye noGoliath umvelisi uDarryl F. Zanuck ngenjongo yokuxela nge-D-Day Ukuhlasela kweNormandy. Phakathi kwoluhlu olude lweenkwenkwezi kwakunguRobert Mitchum , uHenry Fonda , uRol Steiger, uJohn Wayne, uSean Connery kunye namaBlack Buttons. Nangona ubuninzi beempawu eziye zasasazeka kwiinqanaba ezi-5 ezihlukeneyo zokungena, I-Longest Day inomsebenzi omuhle wokuqinisekisa ukuba abaphulaphuli banokulandela kunye nokudibanisa kuyo yonke into eyenzekayo. Ifilimu yathola iinqununu ezi-5 ze-Academy Award, ukuphumelela kwi-cinematography kunye nemiphumo ekhethekileyo.
Enye ifilimu enkulu ejoliswe kwiMfazwe Yehlabathi II, i -Dirty Dozen yabangela ukuba uLee Marvin abe yinkokeli yelijoni elingafanelekanga elifunyanwa kwijele lasejele elithunyelwa kwi-mission yokuzibulala. Kakade, akukho mntu kulindeleke ukuba aphile, kodwa ukuba akwenzayo, amajoni-bonke abo bakhonza izigwebo zobomi ngenxa yobuninzi bezophulo-mthetho baya kuzuza inkululeko yabo baze babuyisele imbeko. I-Dirty Dozen yayiyifilimu ephazamisayo eyayizibhokoxa ukuba ibe yindawo emnyama yemfazwe, eyayikunceda ukuba ibe yinto enye yebhokisi enkulu yebhokisi ye-MGM yeshumi leminyaka.
UClint Eastwood kunye noRichard Burton bahlawula imali ephezulu kwi-action ye-octane enyantyikisayo malunga neqela le-Allied special forces elinikeze umsebenzi ongenakwenzeka wokungena ngaphakathi kwinqaba yamaNazi engenakunceda ukuze kuhlangulwe umphathi wase-American (uRobert Beatty). UBurton wadlala igosa laseBrithani elinokuthi okanye lingenayo i-agent ephindwe kabini ukukhokela iqela eliseBrithani elondolozela i-Eastwood, elithatha ukuba yedwa waseMerika kwaye ekugqibeleni umntu kuphela uBurton angamthemba. Apho i-Eagles Dare iqulethe ukulandelelana kwamanqamle-akho-okubandakanya ukuqhuma okukhulu ukuhamba nge-gondolier - kunye nemigca ephindwe kabini eyokugcina uqikelele malunga nenjongo yangempela ye-mission kuze kube sekupheleni. Ifilimu yayiyimpumelelo enkulu kodwa yabonisa ukuqala kokuphela komsebenzi kaBurton ngoxa i-Eastwood yayisanda nje.
UGeorge C. Scott uhambisa enye yeyona ndlela efanelekileyo yokuqhuba umsebenzi wakhe njengoGeorge S. S. S. Patton, umkhokeli wempi ophikisanayo okholelwa ukuba wayeyindoda ebomini bexesha elidlulileyo kwaye ulungiselelwe ubukhulu kulobu bomi. Kodwa inkani yakhe, wenqaba ukulandela inkqubo yeprotocol kunye neendlela eziphikisanayo - ngokukodwa malunga nejoni ejongene nokukhathala kwezemfazwe-ukubeka ubhedu obuphezulu kunye nokumthintela ekubeni athathe inxaxheba kwi-D-Day Invasion. Ekhokelwa nguFranklin J. Schaffner, uPatton uphakamileyo njengemigangatho ye-biopic kunye nemfazwe kwaye aphumelele ama-Award a-Akhawunti ama-Akhawunti angama-7 afaka umfanekiso oPhezulu kunye no -Actor Best . UScott wagxeka kakhulu u-Oscar ngenxa yokuba wayengekho ukhuphiswano nabanye abalingisi-ukuthokoza ngokucacileyo kumfanekiso we-iconoclastic eboniswayo.
Umlawuli uFrancis Ford Coppola ulungelelaniso lwe-Joseph Conrad's Heart of Darkness lwabekwe ngexesha leMfazwe yaseVietnam kwaye luneenkwenkwezi uMarlon Brando njengoMdonel Kurtz, oye waya e-AWOL enkundleni yaseCambodia kunye nomkhosi wabalwi basekhaya. Okwangoku, umkhosi wathumela umphathi wamkhosi oshisayo (uMartin Sheen) ukuya kutsho "ukutshatyalalisa" uKurtz "ngokubandlulula ngokukhethekileyo," ekhokelela ekuqhubheni kwakhe ngobuqili. Imveliso yeCoppola yinkxalabo iye yaba enye yezona ndawo ezibizwa ngokuba yiHollywood ezithandabuzwayo emva kweengxelo, njengoko ukudubula kwabethelwa yimithambo, imfazwe yombutho ePhilippines, uBrando ufikeleleka ngokugqithiseleyo kwaye engakulungelekanga, kunye no-Sheen ehlaselwa yintliziyo ebulalayo. Nangona isithuba sasibekwe ngokubhekiselele kuye, iCoppola yinto engavamile - abanye bayayibiza ngokuthi i-megalomania-yabona ukuveliswa ngokugqityiweyo, kubangele enye yezinto ezibonakalayo eziyiminyaka elishumi.
Iifrimu ze-Classic Classic kuzo zonke iLungu leNtsapho
7 iBing Crosby Classics
Ngoobani Abaprofeti bamaSilamsi?
'Ukulinganisa ukulinganisa' uMthetho 2 - Uhlalutyo
Isingeniso kwiNethiwekhi zangaphandle